COVID-19 ရောဂါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ခရီးသွားခြင်းမပြုရန် အမေရိကန်နိုင်ငံ အကြံပြု - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တိုကျိုအိုလံပစ် စတင်ရန် နှစ်လခန့်အလိုတွင် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အန္တရာယ်ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအား ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ခရီးသွားလာခြင်းမပြုရန် မေ ၂၄ ရက်က အကြံပြုထားကြောင်း သိရသည်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံများအတွက် ခရီးသွားအကြံပြုချက်အား ကန့်သတ်မှုအမြင့်ဆုံးအဆင့် အဆင့် ၄ : ခရီးသွားလာခြင်းမပြုရန် သို့ သတ်မှတ်မြှင့်တင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး (CDC) က COVID-19 ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် ခရီးသွားလာရေး ကျန်းမာရေးအသိပေးချက်ကို အဆင့် ၄ ထုတ်ပြန်ထားပြီး နိုင်ငံအတွင်း COVID-19 အလွန်မြင့်မားအဆင့်အဖြစ် ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားပါတယ် ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ သတိပေးချက်သည် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် တိုကျိုအိုလံပစ် စတင်ရန် နှစ်လခန့်အကြာတွင် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ မြို့တော်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်နိုင်မလား၊ မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟူသည်ကို အမှုမထားဘဲ အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းထားသော တိုကျိုအိုလံပစ်အား နှစ်လအတွင်း လုံးဝ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ်ကော်မတီ (IOC) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ John Coates က မေ ၂၁ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
တိုကျို၊ အိုဆာကာနှင့် အခြားသော စီရင်စု ၇ ခုမှာ ဧပြီလကတည်းက အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ရှိနေကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှိဟီဒဲ ဆူဂါက နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီရင်စုတွင် COVID-19 ရောဂါ နေ့စဉ်ကူးစက်သူ ၂၀၇ ဦးရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် အိုကီနာဝါ စီရင်စုအား မေ ၂၁ ရက်က အထက်ပါစာရင်း၌ ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီလများက ဂျပန်နိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဖိစီးနေသဖြင့် အဆိုပါ အားကစားပြိုင်ပွဲကိုအများပြည်သူ ဆန့်ကျင်မှုမျမြင့်တက်ခဲ့သည်။ The Asahi Shimbun သတင်းစာ၏ မကြာသေးမီက ကောက်ယူထားသော ဆန္ဒမဲစစ်တမ်းတစ်ခုအရ ဖြေဆိုသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ယခုနှစ် အိုလံပစ်အားကစားပွဲအား တိုကျိုတွင် ကျင်းပခြင်းကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, May 24 (Xinhua) — The United States on Monday advised its citizens against traveling to Japan due to COVID-19 risk, two months before the start of the Tokyo Olympics.
Public opposition to the Games in Japan has intensified in recent months as the country grapples with COVID-19. A recent poll published by Japanese newspaper The Asahi Shimbun showed that over 80 percent of respondents opposed Tokyo hosting the Olympics this year. ■
People walk past closed shops in Tokyo, Japan, May 7, 2021. (Photo by Christopher Jue/Xinhua)